Mpahay lalàna sady mpitsara, Imbiky Herilaza: “Tsy maintsy misy filoham-pirenena mianiana ny janoary 2018” | NewsMada
Mpahay lalàna sady mpitsara, Imbiky Herilaza: “Tsy maintsy misy filoham-pirenena mianiana ny janoary 2018”
Nivahiny tao amin’ny fandaharana “Ambarao”, eo anivon’ny radio Alliance 92 FM, omaly, ny mpahay lalàna, Imbiky Herilaza. Nitondrany fanazavana ny resaka lalàna sy ny fiatrehana ny fifidianana.
Valin-kafatra ho an’ireo kandidà 25. “Efa tafiditra anaty fampielezan-kevitra isika izao ary akaiky ny fotoana vao mametraka izany fitakiana samihafa izany . Tsy vita anatin’ny fotoana fohy ny lisi-pifidianana haverina any amin’ny fokontany, 1 6000. Hosoratana ny tsy voasoratra, esorina ny tsy tokony ho ao, toy ny efa maty, na voasoratra indroa. Amin’ny 26 janoary 2016 anefa, tsy maintsy efa misy filoha vaovao mahavita fianianana eto”, hoy izy. Notsiahiviny fa nanana andraikitra nahafahana nikarakarana lisi-pifidianana ireo nirotsaka hofidina ireo tao anatin’ny fotoana maro, saingy niandrasan’izy ireo neken’ny HCC ny firotsahany vao nanao fitakiana. Afaka manara-maso hatrany ny lisi-pifidianana amin’ny maha antoko politika azy, sy ny maha olom-pirenena, na koa maha mpanao politika azy isan-taona anefa izy ireo, araka ny nambarany.
Azo hanaovana fifidianana ny lisi-pifidianana
Etsy andaniny, nitondrany fanazavana ny momba ny tranga tsy azo anoharana (cas de force majeur) kasain’ny sasany ho antony hanemorana ny fifidianana noho ny lesoka amin’ny birao fandatsaham-bato, na koa ny tsy fahatomombanan’ny lisi-pifidianana. “Voalazan’ny lalàna fa azon’ny HCC atao ny manemotra ny fifidianana raha misy ny fahafatesan’ny kandidà. Faritan’ny governemanta kosa avy eo ny datim-pifidianana”, hoy ihany ity mpahay lalàna ity. Na izany aza, niaiky ny tenany fa tsy mazava amin’ny lalàna kosa anefa ny amin’ny tranga tena tsy azo ihodivirana ka ahafahan’ny HCC mampihemotra ny fifidianana. “Efa mazava ny didin’ny HCC fa tsy mahefa amin’ny fitoriana, na fitakiana momba ny lisi-pifidianana izy ireo satria tsy tafiditra amin’ny fahefana maha mpitsara, araka ny nifidianana azy ireo izany. Tsy mahakasika ny HCC”, hoy ity mpitsara ity. Notsiahiviny ny fanambaran’ny OIF, efa manana traikefa 20 taona amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana teto amintsika fa azo hanaovana fifidianana ny lisitra amin’izao fotoana izao.
Mba ho fifidianana anaty fitoniana
Nohitsiny koa fa tsy azo hamaritana ny isan’ny vahoaka miaraka aminy ireo kandidà mitaky ny hanokafana ny lisi-pifidianana. Tsy misy afaka hiteny izany satria tsy mbola nisy fifidianana teto ary tsy mbola fantatra ny isan’ny vahoaka manohana ny kandidà tsirairay. “Aoka ny lalàna ihany no hampiharina, na firy izy ireo ny mitaky izany” hoy i Imbiky Herilaza. Namaranany ny resadresaka ny antso avo mba ho ao anaty fitoniana izao fifidianana izao. Tsy tokony hifandrangitra, na hifanaratsy. Nentaniny koa ny vahoaka afaka mifidy mba hanefa ny adidiny amin’ny fifidianana fihodinana voalohany sy faharoa, ahafahan’izy ireo mahita fa ny safidiny marina amin’ny valim-pifidianana.